IPod yoLwandle lwaseHilltop - I-Airbnb
IPod yoLwandle lwaseHilltop
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguPam
I-Hillocks Ocean Pods ibonelela ngamava amnandi enkampu. Indawo yokuhlala eyilelwe yangoku ibekwe kwityholo elingaselunxwemeni elinembono entle yeButler's Beach kunye neHillocks Point. Yonwabela uxolo kunye nobuhle bendawo eselunxwemeni ekude kunye ne-ambience yenkampu kunye nobunewunewu bezinto zangoku.
Jonga amatyholo kunye nemekobume yaselwandle. Intlanzi, ukuqubha okanye ukonqena elunxwemeni. Jonga iminenga kwifestile yegumbi lakho lokutyela njengoko idada idlula kwindlela eya kwiindawo zokuzalela. Yolaliswa kukuva izandi zokusefa. Yonwabela isidlo sakusasa kunye nokuncokola kwee-fairy wrens, jonga iHooded Plover esemngciphekweni yokuphela njengoko isitya elunxwemeni kwaye ibukele uKhozi lwaseLwandle lubhabha phezu kwe-Hillocks Point. Gxila kubushushu bePod yakho kwaye ubukele ingqumbo yezaqhwithi zolwandle zibetha kunxweme. Jabulela induduzo yomlilo wenkampu kunye nokupheka kweenkampu ebusika (ukususela kwi-30 ngo-Epreli ukuya kwi-1 ngoNovemba).
I-pod iqulethe iibhedi ezine (i-double and two singles), ishawari eshushu kunye ne-eco toilet. Kukho isitovu segesi, igrill, i-oveni, i-BBQ kunye nezixhobo zokupheka emlilweni ovulekileyo. Iyunithi yenzelwe ukushiya ushicilelo lweenyawo oluphantsi lokusingqongileyo, olunomlinganiselo ophezulu wokonga amandla, isebenzisa amandla elanga nawomoya, amanzi emvula kunye nokuphinda kusetyenziswe inkunkuma. I-12volt inikeza ukukhanya, ifriji, ifriji kunye neendawo zombane. I-inverter ibonelela ngesixhobo sokukhupha iivolthi ezingama-240 (ubuninzi bee-watts ezingama-600 (okanye ii-amps ezi-2.5) kukho ijekhi yesipika se-iPhone okanye i-iPad. Ifeni, indawo eselunxwemeni kunye nokugqunyelelwa zibonelela ngokupholileyo, okutofotofo ehlotyeni. Ukufudumeza kwegesi kukugcina ubushushu kushushu ebusika ilinen, ibhedi, iitawuli kunye neetawuli zaselwandle zibandakanyiwe.
Izilwanyana zasekhaya eziphantsi kolawulo zamkelekile.
Ungathanda abahlobo bakho ukuba bakujoyine kwi-camper-van, ikharavani, okanye intente ecaleni kwePod. Imirhumo eqhelekileyo yokukhempisha iyasebenza.
4.79 · Izimvo eziyi-43
I-Hillocks ikwi-14km ukusuka eMarion Bay kunye ne-16km ukusuka e-Innes National Park. Irempu yesikhitshane kunye neendawo zokuwela i-Foul Bay ziyi-6km ukuya empuma.
Le propati yabucala esele ikwintsapho yethu kwizizukulwana ngezizukulwana. Ukungena kuvumela ukufikelela kwiikhilomitha ezi-7 zonxweme oluhle ukuze uphonononge ngexesha lokuhlala kwakho e-Hillocks Drive, e-Butler's Beach.
Umbuki zindwendwe ngu- Pam
Ifumaneka ngo-8:30 AM - 5 PM
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Marion Bay